दोस्रो छालमा हुत्तिइरहेको कोरोना भाइरस नेपालमा पनि निकै ‘आक्रमक’ – Health Post Nepal
दोस्रो छालमा हुत्तिइरहेको कोरोना भाइरस नेपालमा पनि निकै ‘आक्रमक’
२०७८ वैशाख ८ गते १४:२३
मंगलबार बिहानै बिबिसीले एउटा समाचार लेख्यो-‘जहाँ हेरे पनि लाशैलाश अनि एम्बुलेन्सहरू मात्रै देखिन्छन्।’
कोरोना भाइरस संक्रमणले थलिँदै गएको भारतको समाचार थियो यो। त्यसमा पनि समाचारभित्र उत्तर प्रदेशका दृश्यहरू उतारिएका थिए।
कोराना संक्रमणबाट अहिले सबैभन्दा धेरै प्रभावित भारतको उत्तर प्रदेश हो। नेपालको धेरै भाग जोडिएको उत्तर प्रदेशको मुख्य केन्द्र लखनउ अहिले धेरै आक्रान्त छ।
भारतमा मंगलबारमात्रै दुई लाख ५९ हजार १ सय ७० जना मानिस संक्रमित भएका छन्। १ हजार ७ सय ६१ जनाको मृत्यु भएको छ।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएअनुसार यहाँ अब कोरोना संक्रमितको संख्या १ करोड ५३ लाख नाघेको छ। १ लाख ८० हजार ५ सय ३० जना मानिसले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्।
त्यसमा पनि अहिले सबैभन्दा धेरै भारतको उत्तर प्रदेश आक्रान्त छ। भारतका धेरै राज्यहरूमा अक्सिजनको अभाव छ। मानिसहरू अक्सिजन खोसाखोस गरिरहेका छन्।
अक्सिजनको अभाव टार्न सरकारले ‘अक्सिजन एक्सप्रेस’ सुरु गरेको छ। यो एउटा अक्सिजन ट्याङ्क हो र यसबाट एकदमै आवश्यक ठाउँमा छिटो भन्दा छिटो अक्सिजन पुर्‍याउन सकिन्छ। कतिपय राज्यहरूले केन्द्र सरकारले अक्सिजन वितरणमा अन्याय गरेको भनिरहेका छन्।
अस्पतालका बेडहरू भरिएका छन् र एउटै बेडमा ३ जना संक्रमितलाई सुताएर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। एकदमै गम्भीर अवस्थाका संक्रमितलाई लगाउन मिल्ने रेमडिसिभिरको अभाव चुलिएको छ।
कतिपय सहर फेरि ‘लकडाउन’ गरिएको छ। विद्यालय अनि कलेजहरू फेरि बन्द भएका छन्। राजधानी दिल्लीमा ‘कर्फ्यू’ लगाइएको छ।
यसको बाछिटा नेपालसम्मै आइपुगेको छ– भारतको उत्तरप्रदेश मुख्य केन्द्र लखनउ नजिकै रहेको बाँके जिल्लाको नेपालगन्ज आगामी बिहीबारदेखि एक साताका लागि ‘लकडाउन’ गरिएको छ।
नेपालमा कस्तो अवस्था?
कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा पहिलो पटक लकडाउनको सुरुवात नेपालगन्जबाट भएको छ।
‘यो अज्ञात र रहस्यमयी महामारी हो। जसका बारेमा विज्ञान पनि अझै अन्तिम निश्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।
त्यसैले यसबाट बच्ने उपाय भनेकै स्वास्थ्य सावधानी अपनाउने नै हो। सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्य निर्देशनहरू पलना गरिएन भने सरकार फेरि अर्को कठोर कदम चाल्न बाध्य हुनेछ’ मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आयोजित एउटा भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री हृदयेस त्रिपाठीले भने ‘तर सरकार चाहँदैन किमार्थ त्यस्तो होस्। लकडाउनको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र मानवीय मूल्य कसरी चुकाउनुपर्छ भनेर हामीले भोगिसकेका छौं।’
मन्त्री त्रिपाठीले आम नागरिकले स्वास्थ्य सावधानी नअपनाए सरकार फेरि लकडाउन गर्न बाध्य हुने चेतावनी धेरैपटक दिए।
‘हामीले यी निर्देशनहरू पनि त्यत्तिकै जारी गरेका होइनौं। सरकारले आफ्नो वर्चश्व लाद्नका लागि यस्ता निर्देशन जारी गरेको होइन’ उनले भने ‘यो सबै नागरिकको ज्यान जोगाउनका लागि हो। सरकारकाफ पहिलो प्राथमिकता भनेको नागरिकको ज्यान जोगाउनु नै हो।’
मंगलबारमात्रै नेपालमा १ हजार छ सय ६७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। योसँगै नेपालमा हालसम्म संक्रमितको संख्या २ लाख ८७ हजार ५ सय ६७ पुगेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंगलबार जनाएअनुसार २४ घण्टामा ११ जनाको मृत्यु भएको छ। योसंगै नेपालमा तीन हजार एक सय दुईजनाको मृत्यु भईसकेको छ।
८ जिल्लामा २ सय भन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित भेटिइसकेका छन्। मृत्यु दर पनि ५ प्रतिशतले बढेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘भारतमा पनि यो जोखिम कहालीलाग्दो स्थितिमा छ। सरकारका लागि सबैभन्दा धेरै नागरिकको जीवनलाई महत्व दिएको छ। सरकारले जारी गरेको निर्देशन पालना गरिएन भने फेरि लकडाउनसम्मै जानुपर्ने हुनसक्छ’ मन्त्री त्रिपाठीले भने ‘स्थिति गम्भिर हुनेतर्फ अघि बढिरहेको छ। यसलाई हल्कारुपमा नलिइदिउँ। महामारीको यो लहरलाई पनि हामी परास्त गर्नसक्छौं। तर त्यसका लागि हामीले सावधानी अपनाउन जरुरी छ। सरकारले फेरि चाहँदैन कि फेरि लकडाउन गर्नुपरोस्।’
हाल देशभरका सबै अस्पतालहरुमा जम्मा एक हजार एक सय आठ आइसियु रहेका छन् भने ४ सय ३० भेन्टिलेटर उपलब्ध छन्। यीमध्ये १३ प्रतिशत आइसियु र १० प्रतिशत भेन्टिलेटर भरिइसकेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार देशभर करिब २ हजार बिरामीलाई पुग्नेजति रेमडिसिभिर छ। अहिलेसम्म करिब २० लाख डोज खोप लगाइको छ र दोस्रो डोजको सुरुवात पनि मंगलबारबाट भइसकेको छ।
अक्सिजनको सहज व्यवस्थापनका लागि सरकारले अक्सिजन उत्पादक कम्पनीहरूसँग छलफल गरिरहेको स्वास्थ्य सचिब अर्यालले जानकारी दिए। उनका अनुसार अहिले केही समयका लागि अक्सिजनको अभाव छैन।
सरकारले निजी अस्पतालमा ५० प्रतिशत बेडहरू कोरोना उपचारका लागि अनिवार्य छुट्याउन निर्देशन जारी गरेको छ। आवश्यक परेमा निजी क्षेत्रका जनशक्त्ति तथा उपकरणहरूसमेत सरकारले प्रयोगमा ल्याउनसक्ने निर्देशन पनि सरकारले जारी गरिसकेको छ।
दोस्रो लहरमा कोरोनाको नेपाली रुप कस्तो छ, कति खतरा?
दोस्रो छालमा हुत्तिँदै गर्दा कोरोना भाइरसले केही रुप फेरेको छ। र, विश्वका विभिन्न ठाउँमा पुष्टि भएका उसका नयाँ स्वरुपहरूलाई विभिन्न नाम दिइएको छ। त्यसैले ‘भेरियन्ट’ भनिन्छ।
खासगरी अहिले दोस्रो लहरमा विश्वभरि चक्कर लगाइरेका बेलायती भेरियन्ट हो। यसलाई ‘बी.१.१.१’ भनेर बैज्ञानिक नाम दिइएको छ। कोरोनाको यो रुप विश्वका करिब ५० देशमा फैलिएको पुष्टि भएको छ। त्यस्तै अर्को ‘बी.१.३५१’ अर्थात् अफ्रिकी भेरियन्ट। यो बेलायतमा पनि फैलिएको छ र अरु २०वटा देशमा पुगिसकेको छ। ब्राजिल भेरियन्ट ‘पी. १’ पनि बेलायतमा भेटिएको छ। यसरी भाइरसका विभिन्न स्वरुपहरू थुप्रिएर बेलायत त्यसको ‘ट्रान्जिट’जस्तै भएको छ।
अर्को हो भारतीय भेरियन्ट अर्थात् ‘बी.१.६१७।’
यो खासगरी भारत वरिपरिका देशमा घुमिरहेको छ। नेपालमा यो भेरियन्ट फैलिएको आशंका गरिएको छ तर, सबैको जिन सिक्वेन्सिङ हुन सकेको छैन।
रोग नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलका अनुसार अहिलेसम्म यो भेरियन्ट ललितपुरका एकजनालाई पुष्टि भएको छ। उनी अहिले स्वस्थ नै छन्।
त्यस्तै बेलायतको भेरियन्ट पनि नेपालका करिब १५२ जनामा पुष्टि भएको थियो। यी सबै हङकङको प्रयोगशालाबाट पुष्टि भएका छन्।
एकभन्दा धेरै स्वरुपका भाइरसको संगम भएपछि त्यसलाई ‘डबल म्युटेन्ट’ भनिन्छ। भारतभरि फैलिइरहेको त्यही स्वरुप हो। तर, नेपालमा भाइरसको नयाँ स्वरुप पत्ता लगाउनका लागि जिन सिक्वेन्सिङ गर्ने प्रविधि छैन।
‘ब्राजिलियन र साउथ अफ्रिकन भेरियन्ट अहिलेसम्म नेपालमा पुष्टि भइसकेको छैन’ पौडेलले भने ‘हामीले यहाँका केही विश्वविद्यालय तथा विश्वस्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा यहीँ नै नयाँ भेरियन्ट पत्ता लगाउने प्रविधिमा काम गरिरहेका छौं।’
उनका अनुसार जुनसुकै भएपनि दोस्रो लहरमा जुर्मुराएको यो भाइसरको रुप एकदमै संक्रामक छ। यो निकै चाँडै धेरैजनामा सर्न सक्छ र पहिलाको भन्दा धेरै बलियो पनि छ। यसले संक्रमणलाई जटिल बनाउन पनि सक्छ।
अझ त्यसमा पनि अहिलेको भाइरसले बालबालिका र युवालाई नयाँ ‘टार्गेट’ बनाइरहेको छ।
मंगलबारमात्रै नेपालमा १९ वर्षसम्मका १ सय ९३ जना बालबालिकामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै सबैभन्दा धेरै ३० देखि ३९ वर्षका ४१७ जना संक्रमित भएका छन् भने २० देखि २९ वर्ष उमेरका ३७० जना संक्रमित भएका छन्। त्यसपछि ४० देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका ३१२ जना संक्रमित भएका छन्।
संक्रमणको यो औसत रुप पछिल्ला केही सातादेखि दोहोरिँदै आएको छ।
सरकारले यो लहरको उत्कर्षमा दैनिक करिब ११ हजारसम्म संक्रमित हुनसक्ने आंकलन गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिब लक्ष्मण अर्यालका अनुसार अबका कम्तिमा ९ साता एकदमै कठीन हुनेछन्। संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएको ५ साता गुज्रिसकेको छ।
‘संक्रमणको ट्रेन्ड हेर्दा यसको एकदमै उच्चतम संक्रमण गति कम्तीमा १४ हप्तासम्म हुनसक्छ भन्ने हाम्रो आंकलन हो’ उनले भने ‘५ हप्ता बितिसकेको छ। अबका ९ हप्ता हाम्रा लागि अत्यन्तै कठीन हुनेछन्। त्यसैले हामीले स्वास्थ्य निर्देशनहरू अनिवार्य पालना गर्न निकै जरुरी छ।’
कोरोना दोस्रो छाल